गरिबीले पछि परेको यति मिठो स्वर, सबैलाई चकित पारिन यी युव’ तीले हे’र्नुहोस भिडियोमा – Ap Nepal
गरिबीले पछि परेको यति मिठो स्वर, सबैलाई चकित पारिन यी युव’ तीले हे’र्नुहोस भिडियोमा
काठमाडौ । सामाजिक सन्जालमा अहिले यति धेरै पावर छ कि यसैबाट कसैको जिन्दगी बन्छ भने कसैको बनेको पनि बिग्रन जान्छ, यति पावरफुल छ आजकलको इन्टरनेट र समाजिक सन्जालको दुनिया ।
फेस्बुक, युटयुव जस्ता सन्जालबाट भित्र लुकेर दबिएर बसेका प्रतिभाहरु पनि बाहिर आईरहेका छन र देश पनि हल्लाएर बसेका छन भन्दा फरक नपर्ला ? जस्तो पछिल्ला उदाहरण हुन रचना रिमाल, समिक्षा अधिकारी, एलिना चौहान, प्रबिन बेडवाल, अशोक दर्जी लगायत सम्पूर्ण ।
जस्ले अहिले नेपाली गित संगीतलाई छुट्टै स्थानमा पुराउन पनि सहयोग गरिरहेका छन, हो आज हामी त्यस्तै एउटा गरिबीको पिडामा लुकेर बसेको प्रतिाभाको कुरा गर्दैछौ ।
उनको नाम हो तुल्सी थापा मगर जो सुर्खेतकी हुन भने अहिले यहि काठमाडौमा बसेर आफनो काम अगाडि बढाईरहेको बताउछिन । भबिष्यमा ठूलो गायिका बन्ने सपना बोकेकी तुल्सीको मनपर्ने गायिका बिष्णु माझी हुन भने गायकमा खेम सेन्चुरी हुन ।
जस्ता गित पनि सजिल्लै कडा गाउन सक्ने यि चेलीको गुनासो के छ भने अहिले सामाजिक सन्जालको दुरुपयोग भएको र राम्रा प्रतिभाले ठाउ नपाएको बताउछिन । धेरैले दुख मात्र देखाएर सान्त्वना मात्र पाउन खाजेको उनको गुनासो छ, हेरौ यो जादूमय स्वर |
Prevटिका सानु र कृष्ण कंडेल वि’वाद बारे बोले चर्चित गायक राजु परियार (भि,डियो सहित)
Nextनङमा यस्तो सेतो आकार हुनुको अ’र्थ यस्तो हुन्छ : प’ढ्नुहोस्
आज ह्वात्तै बढ्यो डलरको भाउसँगै साउदी,कतार,मलेसिया लगायत यी बिदेशी मुद्राको भाउ..
श्रीमती नै सधै गलत हुन्छन् भन्ने छैन : हेर्नुहोस यो भिडियो जसले भावुक बनायो तपाँईलाई के लाग्छ ? (भिडियो सहित)
किसानले दुध बेच्नकै लागि ४८ करोडको हेलिकप्टर किने, खेतमा हे लिप्याड बनाए..
नेपाल पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? आज यस्तो छ बिदेशी मुद्राको भाउ..
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (46593)
फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य,लिटरकै यति पुग्यो..